Infografika 2 momba ny Psychology sy ROI ny loko amin'ny marketing
Mpitsentsitra infografika miloko aho… efa namoaka izahay ahoana ny fandikan'ny lahy sy ny vavy ny loko, loko, fihetsem-po ary marika ary na tsia tsy ny loko no misy fiatraikany amin'ny fividianana fividianana. Ity infographic ity dia milaza antsipiriany momba ny psikolojia ary na dia ny fiverenan'ny fampiasam-bola mety ho azon'ny orinasa iray aza amin'ny fifantohana amin'ny loko ampiasain'izy ireo mandritra ny fiainany mpampiasa.
Ny fientanam-po ateraky ny loko dia mifototra amin'ny zavatra niainan'ny tena manokana fa tsy tamin'ny zavatra nolazaina tamin'izy ireo fa natao hisolo tena azy ireo. Ny loko mena dia mety hampahatsiahy ny olona iray amin'ny Krismasy (mafana, tsara), raha toa kosa ka mahatonga ny olona iray hieritreritra ireo kamiao mpamono afo amin'ny andro may ny tranony (ratsy).
Red - Angovo, ady, loza, tanjaka, fahatezerana, tanjaka, hery, finiavana, filana, faniriana ary fitiavana.
voasary - Fientanentanana, mahaliana, fahasambarana, famoronana, fahavaratra, fahombiazana, famporisihana ary fanentanana
Yellow - Fifaliana, aretina, herisetra, fahasambarana, saina, fahasalamana, fifaliana, tsy filaminana ary hery
Green - Fitomboana, firindrana, fanasitranana, fiarovana, natiora, fitiavam-bola, fialonana, kanosa, fanantenana, tsy misy traikefa, fandriampahalemana, fiarovana.
Blue - Fahamarinana, fahaketrahana, natiora (Ny lanitra, ny ranomasina, ny rano), ny fitoniana, ny halemem-panahy, ny halaliny, ny fahendrena, ny faharanitan-tsaina.
Purple - Royalty, rendrarendra, mihoa-pampana, fahamendrehana, majika, harena, mistery.
Pink - Fitiavana, tantaram-pitiavana, fisakaizana, tsy fitoviana, tsy fitiavam-bola, firaisana ara-nofo.
White - Fahadiovana, finoana, tsy fananan-tsiny, fahadiovana, fiarovana, fitsaboana, fanombohana, lanezy.
Grey - Fahamendrehana, haizina, tsy fiandaniana, fanapahan-kevitra
Black - Fahamendrehana, fahafatesana, tahotra, ratsy, zava-miafina, fahefana, fahamendrehana, ny tsy fantatra, fahamendrehana, alahelo, loza, laza.
Brown - Fijinjana, hazo, sôkôla, azo ianteherana, tsotra, fialan-tsasatra, any ivelany, fahalotoana, aretina, rikoriko
Raha tena te handalina ny fiantraikan'ny loko amin'ny marika ianao dia aza hadino ny mamaky an'i Dawn Matthew avy ao amin'ny lahatsoratr'i Avasam izay manome antsipiriany tsy mampino momba ny fiantraikan'ny loko amin'ny mpampiasa sy ny fitondran-tenany:
Psychology loko: ny fiantraikan'ny dikany loko amin'ny marikao
Ity misy infographic avy amin'ny Diplaoma Psychology tsara indrindra momba ny psikolojia momba ny loko izay manazava antsipirian'ny fampahalalana taonina ny fomba fandikan'ny loko ny fitondran-tena sy ny vokatra!
Tags: fiandohan'nymaintymangaBrownsôkôlafahadiovanalokokanosafamoronanaLozafahafatesanafanapahan-kevitraazo itokisanafahaketrahanalalinafanirianatapa-kevitrafahamendrehanaaretinarikorikoFahamendrehanahajafampaherezanaEnergyratsyfientanentananatafahoatrafinoanaMahalianatahotrafahalotoanafreshnessfisakaizanamaizinafitiavam-bola tafahoatramaitsoGreyalahelofitomboanafahasambaranaHarmonyfijinjanafanasitrananamanantenatsy manana traikefamanan-tsinyfikorontananafahiratantsainafahiratan-tsainafahasaro-piaroJoyfitiavanalafo vidymajikafanafodyzava-miafinatoetraNatiora (Ny lanitratsy nety nanao miaramilaNostalgiavoasarypassionpassivenessfandriampahalemanamavokelyfahefanavoninahitrafiarovanafahadiovanaPurplefahatezeranamenafialam-bolyolon-tianyfianakavian'ny mpanjakafiarovanaara-pananahanaaretinatsotraoram-panalamalemy ilay manjaranopanajana-tsitrapofahamarinan-toeranatairinaheryfahombiazanafahavaratrany ranomasinany eny ivelanyny tsy fantatrazava-dozafilaminanamavitrikaadyrano)harenaWhitefahendrenahazomavo
TestFlight: Fitsapana iOS Beta ary fanaraha-maso mivantana ny app